Addi Bilisummaa Oromoo xalayaa gara boordii filannootti barreesseen waajjirri isaa muummeen akka banamu gaafate. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAddi Bilisummaa Oromoo xalayaa gara boordii filannootti barreesseen waajjirri isaa muummeen akka banamu gaafate.
SQ | Guraandhala 25, 2021
Guyyaa har’aa (Guraandhala 25/2021) Addi Bilisummaa Oromoo gara boordii filannoo biyyoolessaatti xalayaa barreesse. Xalayaa kana keessatti waajjirri dhaabichaa muummeen Adoolessa 25/2012 irraa eegalee to’annoo poolisii Finfinnee jala jiraachuufi kanaafis yeroo adda addaatti iyyata galfachaa turuu ibseera. Amajji 26/2013 (ALI) boordiin filannoo xalayaa gara Adda Bilisummaa Oromootti barreesseen dhaabichi akka heeraafi dambii isaatti kora sabaa geggeeffatee rakkoo hoggana gidduutti uumame akka furachuu qabu murteessuusaa Addi Bilisummaa Oromoo xalayaa kana keessatti eeree, kora kana geggeessuudhaafis koreen qopheessituu kora sabaa kan Gumii Sabaa ABO’tiin filame kora kana geggeessuuf qophii eegaluusaa akka beeksisee jiru ibseera. Koreen qopheessituu kora sabaa kun miseensota Gumii Sabaa dhaabichaaf, miseensota waliigalaa dhaabichaafi jaarmiyaa waliigalaafis garagalchaan akka beeksisee jiru xalayaa kanaan ibsameera.
“Haa ta’u malee, koreen qindeessituu kora sabaa kun miseensota koree kanaa sababa hidhamaniifi sababoota adda addaan hir’atanii jiran guuttatee, akkasumas koreewwan xixiqqaa gara gadii jiran deebisee ijaaree hojii itti fufsiisuudhaaf waajjirri keenya muummeen cufamee jiraachuun danqaa ta’eera” jedhe Addi Bilisummaa Oromoo xalayaa gara boordii filannootti barreesse kanaan.
Murteen boordii filannoo akka kabajamuufi dhaabichi haala seeraafi dambii isaatiin kora sabaa geggeeffatee rakkoo keessoo dhaabichaa akka furatu taasifamuuf gareen Araarsoo Biqilaafaa tumsa mootummaatiin seeraan ala adeemsa dambii dhaabichaa cabsuun wajjira ABO muummicha cufsiisan akka deebisanii bansiisan boordiin filannoo biyyoolessaa itti gaafata.
Addi Bilisummaa Oromoo shira diinotaan diigamuu hin danda'u
Addi Bilisummaa Oromoo shira diinotaan diigamuu hin danda'u Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Hagayya 26/2019 Tibba kana…